Hal askari oo ku dhaawacmay rasaas lagu furay ciidanka amniga ee Galkacyo; bilayska oo qaybtay mid ka mid ah raggii weerarka gaystay. – Radio Daljir
Hal askari oo ku dhaawacmay rasaas lagu furay ciidanka amniga ee Galkacyo; bilayska oo qaybtay mid ka mid ah raggii weerarka gaystay.
Maajo 28, 2011 12:00 b 0
Galkacyo May 28 – Hal askari ayaa ku dhaawacmay hawl-gallo ammaan oo ciidanka amnigu ay ka sameeyeen magaalada Galkacyo kaddib markii ay rasaas is-waydaarsadeen rag hubaysan oo la tilmaamayo in ay abaabulnaayeen, kuwaasi oo ka dul-dhacay goob bilaysku baaritaanno ka wadeen.
Ciidamada nabad-galada magaalada Galkacyo ayaa is-rasaasayntaasi kaddib gacanta ku dhigay hal nin oo lagu eedaynayo ku-lug-lahaansho danbi, kaasoo la qabtay xilli isaga iyo koox la socoday ay isku-dayayeen gaysasho weerer gaadmo ah sida uu Daljir u sheegay madaxda ciidamada hawl-gallada amni ee Mudug Col. Muuse Axmed Cabadiraxmaan Xasaasi.
Ninka la qabtay ayaa qaba dhaawac rasaaseed oo ay ciidanku u gaysteen kaddib markii isaga iyo rag hubaysan oo la socday bilayska la dagaallameen kuwaasi oo markii danbana u baxsaday xaafadda Wadjir ee magaalada Galkacyo sida uu xaqiijinayo Col. Muuse Xasaasi.
Md. Xasaasi, waxaa uu tilmaamay hadda in ay ku hawllan yihiin baaritaanno dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo ragga falkan weerarka ah gaystay cidda ay salka ku hayaan iyo meesha laga soo abaabulay intaba.
Ninkii ay bilaysku qabteen isagoo dhaawac ah, ayaa hadda lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Galkacyo waxaana la tilmaamayaa in uu qabo dhaawac xoogan.
Waa markii ugu horraysa oo ciidanka nabad-galyada magaalada Galkacyo ay la kulanmaan dhacdo tan oo kale ah tan iyo intii Galkacyo laga bilaabay hawl-gallada amniga lagu adkaynayo muddo bil ku siman.
Dagaallo xalay iyo maantaba ka dhacay Muqdisho iyo dawladda iyo Al-shabaab oo guulo kala sheegtay